Caafimaadka Espoo - InfoFinland
Magaalooyin > Espoo > Nolosha Espoo > Caafimaadka Espoo
Adeegyada caafimaadka ee Espoo
Wac lambarka gargaarga deg degga ah 112, haddii xaaladu ay tahay mid degdeg ah. Wac lambarka gargaarga deg degga ah tusaale ahaan markii, uu dhaco shil khatar ah ama uu xanuun lama filaan ahi ku soo boodo qof dadka ka mid ah. Ha wicin lambarka gargaarka deg degga ah haddii aysan xaaladu ahayn mid khatar ah.
Haddii aad guri ka degan tahay, waxaad isticmaali kartaa adeegyada caafimaadka ee shacabka. Adeegyada caafimaadka ee shacabka waxaa fidiya rugaha caafimaadka, gobaha daryeelka ilkaha, rugaha la-talinta iyo cusbitaalada.
Haddii aadan xaq u leheen isticmaalka adeegyada caafimaadka shacabka, waxaad gargaar caafimaad ka raadsan kartaa tusaale ahaan rugaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay. Dhammaan qarashka ku baxaya rugaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay waa inaad adigu iska bixisaa.
Warar dheeraad ah ka sii aqri: Caafimaadka.
Adeegyada caafimaadka ee shacabka waxaa fidiya rugaha caafimaadka (terveysasema). Rugaha caafimaadku waxay furan yihiin maalmaha shaqada saacadda 8- 16. Sida caadiga ah waxaa rugaha caafimaadka jooga dhaqtar, kalkaaliyayaal caafimaad iyo qaabilaadyo daryeel caafimaadeed.
Rugta caafimaadka waxaad ballan uga qabsan kartaa telefoonka. Bogagga magaalada Espoo waxaa ku jira macluumaadka xiriirka rugaha caafimaadka iyo nambarada telefoonada. Marka aad wacdo rugta caafimaadka, telefoonkaada horay loogama jawaabo. Laakiin nambarkaadu wuxuu ku keydsamaa awtomaatiiga, wax yar kadibna waa laguugu soo celinayaa ama dib ayaa laguu soo wacayaa.
Imow qaabilaada. Haddii aadan imaan karin qaabilaada, xusuusnow inaad baajisid ama kansashid waqtigii laguu qabtay ugu dambeyn maalin ka hor ugu dambeyn saacaddu markay tahay 14.00.
Haddii aad degdeg ugu baahdo gargaar caafimaad, waad imaan kartaa rugta caafimaad ballan la’aan.
Goobaha caafimaadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Kharashka xarunta caafimaaadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Rugta caafimaadka ee gaarka ah waxaa aadi kara qof kasta. Rugta caafimaadka ee gaarka ahi waxay sidoo kale ku haaboon qofka aan xaq u leeyahay adeegyada caafimaadka shacabka ee Finland. Dhammaan qarashka ku baxaya rugta caafimaadka gaarka ah macaamilku waa inuu iskiis isaga bixiyaa.
Espoo waxaa ku yaal rugo caafimaadyo badan oo gaar loo leeyahay. Macluumaadka xiriirka dhaqaatiirta gaarka ah waxaad ka heleysaa tusaale ahaan internetka.
Adeegyada caafimaadka ee gaarka ahFinnish
Macluumaad la xiriira iibsiga dawooyinka waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Dawooyinka
Daryeelka caafimaadka dadka aan dukumentiga lahayn
Magaalada Espoo waxay daryeel caafimaad siisaa dadka Finland sharci la’aanta ku jooga. Weydii macluumaadka rasmiga ah ee arrintan ku saabsan magaalada Espoo, tel. 09 816 34500.
Warar dheeraad ah ka sii aqri: Adeegyada caafimaadka ee Finland
Habeenkii iyo maalmaha dhammaadka todobaadka rugta caafimaadku waa xiran tahay. Markaas waxaa jirooyinka degdega ah iyo shilalkaba lagu daryeelayaa heeganka (päivystys). Heegaanka dadka waaweyn waa cusbitaalka Jorvi ee Espoo.
Ka hor inta aadan imaan heeganka, wac adeegga lacag la’aanta ah ee Caawimaadda heeganka, tel. 116 117.
Heeganka cusbitaalka Jorvi
Heegaanka dadka ka yar 16 sano wuxuu ku yaal Jorvi iyo Lastenklinikka ee Helsinki.
Heeganka in ballan loo qabsado looma baahna.
Daryeelka caafimaadka carruurta ee u dhexeysa da’da 1- 6 sano waxaa dadka ka caawiya kalkaalisada caafimaadka ee rugta la-talinta (neuvola) iyo dhaqtarka. Waxaad weydiisan kartaa iyaga talooyinka iyo kaalmada waalidnimada iyo koriinshaha cunugga. Rugta la-talinta waxaa lagula socdaa cafimaadka cunugga iyo koriinshihiisa.
Dhinacyo kala duduwan oo ka mid ah magaalada Espoo waxaa ku yaal rugo la-talineedyo badan. Macluumaadka xiriiryada rugaha la-talinta waxay ku jiraan bogga shabakadda magaalada Espoo. Rugaha la-talinta oo dhan telefoon isku mid ah ayaad ballan uga qabsan kartaa.
Ballanta waqtiga ee rugta la-talina
Haddii cunug jirado islamarkaasna uu degdeg ugu baahan yahay daryeel caafimaad, la xiriir rugta caafimaadka (terveysasema).
Caruurta da’da iskuulka waxaa caafimaadkooda daryeela kalkaalisada ama kalkaaliyaha caafimaadka ee iskuulka.
Habeenkii iyo maalmaha dhammaadka todobaadka heeganka carruurta ka yar 16ka sano waa Jorvi iyo Lastenklinikka ee Helsinki.
Sidoo kale carruurta waad geyn kartaa xarumaha dhakhaatiirta ee gaarka loo leeyahay.
Warar dheeraad ah ka sii aqri: Caafimaadka carruurta
Waad isticmaali kartaa adeegyada degmo ee dhaqtarka ilkaha haddii aad Guri degmo ku leedahay Espoo. Haddii ay tahay inaad gargaar deg-deg ah u baahan tahay, waad adeegsan kartaa adeega degmada, xitaa haddaadan aheyn reer Espoo.
Ballan ayaad nambarka wadajirka ah ee rugaha daryeelka Espoo uga qasban kartaa dhaqtarka ilkaha.
Ballanta waqtiga rugaha daryeelka ilkaha
Nambarka waxaa la wici karaa maalmaha shaqada.
Maalmaha shaqada Isniinta illaa iyo Jimcaha, tel. 09 816 35900.
Heeganka habeennimo ee xaaladaha degdeg ah ee saacadda u dhexeysa 21-8 waa Isbitaalka Töölö ee Helsinki, tel. 040 621 5699.
Haddii aad dhaqtarka ilkaha degdeg ugu baahan tahay habeenkii ama dhammaadka toddoobaadka, la xiriir cusbitaalka Haartman ee Helsinki ku yaal. Heeganka cusbitaalka Haartman maalmaha shaqada, saacadda 14–21 iyo Sabti-Axad saacadda 8–21. Heeganka horay u sii wac.
Daryeelka caafimaadka afkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Daryeelka ikaha bareefadka ah
Espoo waxaa kale oo laga helaa dhaqaatiirta ilkaha oo gaar ah. Dhaqaatiirta ilkaha ee gaarka ah waad aadi kartaa, haddii xitaa aadan xaq u laheyn adeegyada daryeelka caafimaadka shacabka. Daryeelka ilkaha bareefadka ah wey ka qaalisan yihiin adeega daryeelka ilkaha dadweynaha loogu talogaley.
Warar dheeraad ah ka sii aqri: Daryeelka ilkaha
Haddii aad u baahantahay caawimaad ama taageero la xiriirta arrimaha caafimaadka dhimirka ama maandooriyaha, la xiriir adeegyada caafimaadka dhimirka iyo maandooriyaha ee Espoo.
Ballan qabsashada maalmaha shaqada waxaa laga qabsadaa saacadda u dhexeysa 8-16 lambarka 09 816 31300.
Waxaad sidoo kale ballan la’aan imaan kartaa Kiliinikada caafimaadka dhimirka iyo maandooriyaha. Waxay furantahay Isniin-Jimco.
Cinwaanka: Barxadda adeegga ee Iso Omena, Suomenlahdentie 1.
Haddii aad degdeg ugu baahan tahay caawimaadda xasaradda, la xiriir heeganka sooshalka iyo xasaradaha ee Galbeedka Uusimaa.
Heeganka sooshaalka iyo xasaradaha ee Galbeedka Uusimaa
Wuu furan yahay maalin kasta afar iyo labaatanka saac.
Teleefanka xaaladaha dhibaada oo wadanka oo dhan ka shaqeeya kriisipuhelinFinnish | Iswidish | Ingiriis | Carabi
Rugaha la-talinta ka hortaga uurka (ehkäisyneuvola) ee goobaha caafimaadka waxaad ka heleysaa caawimaad dhinaca ka-hortaga uurka iyo qorsheynta qoyska. Dhalinyaradu waxay caafimaadka galmada kala sheekeysan karaan kalkaalisada caafimaadka ee iskuulkooda.
Haddii aad u baahan tahay baaritaanka caafimaadka dumarka, la xiriir rugta caafimaadka. Ballan waad ka qabsan kartaa sidoo kale dhaqtarka haddii aad u baahan tahay in laguu qoro warqada daawada ka hortaga uurka darteed ama haddii aad ka fekereyso inaad ilmo iska soo rido. Macluumaadka xiriirka rugaha caafimaadka ee Espoo waxay ku jiraan bogga shabakadda magaalada Espoo.
Cudurada ku dhaca hab-dhiska taranka ama galmada waxaa lagu daaweeyaa Kilinikada cudurada hab-dhiska taranka ee Helsinki.
Warar dheeraad ah ka sii aqri: Caafimaadka galmada
La xiriir rugta la-talinta (neuvola) haddii aad dareento inaad uur leedahay. Rugta la-talinta waxaa lagula socdaa hooyada, cunugga uurka ku jira iyo caafimaadka guud ee qoyska waqtiga uurka. Dhinacyo badan oo Espoo kamid ah waxaa ku yaal rugo la-talineedyo badan oo kala duduwan. Dhamaantood waxaa ballan uga qabsan kartaa nambar isku mid ah.
La-talinta iyo ballanta waqtiga ee rugaha la-talinta
Warar dheeraad ah ka sii aqri: Uurka iyo dhalmada.
Espoo waxaa ku yaal cusbitaalka Jorvi, kaaso o lagu umuli karo. Haddii aad dooneyso, waxaa kale oo aad ku dhali kartaa cusbitaalada Helsinki iyo degmada Uusimaa (HUS). Macluumaad dheeraad waxaad ka heleysaa bogagga HUS.
Magaalada Espoo waxay dadka naafada ah u qabanqaabisaa adeegyo u gaar ah, tusaale ahaan waxqabad-maalmeed iyo gaadiid ku qaadis. Adeegyadan waxaa xaq u leh inay helaan dadka deegaanka ku ah degmada Espoo.
Shaqaalaha sooshaalka ee magaalada waxaad ka codsan kartaa adeegyo iyo kaalmooyin waxqabad.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeeyada naafada waxaad ka heleysaa adeegyada naafada ee Espoo.
Adeegyada naafada ee Espoo
Adeegyada kaalmada naafadaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Warar dheeraad ah ka sii aqri: Dadka naafada ah